Xukuumadda Kenya oo ka qeylisay warbixin kasoo baxday Midowga Yurub | TOP NEWS
Xukuumadda Kenya oo ka qeylisay warbixin kasoo baxday Midowga Yurub
“Waxaan u diyaargaroobnay in aan u safrno Nairobi todobaadkan si aan u soo bandhigno warbixinta kama dambeysta ah iyo talo-bixinnada aan u dirno xukuumadda Kenya iyo sidoo kale daneeyayaasha kale ee muhiimka ah, dabcan muhiimadda ugu weyn ay tahay dadka Kenyaanka ayay tiri madaxa kormeerka Midowga Yurub, Marietje Schaake.
Xukuumadda Kenya ayaa dhankooda sheegtay in booqasho lagu heshiiyey ‘inta u dhaxaysa Bisha Febraayo illaa bartamiha Maarso’ halka Marietje Schaake ay ku sheegtay warbixinteeda in ay sii deynayso warbixinta si ay ula kulanto mabaadi’da Midowga Yurub ee ah inay soo gudbiyaan warbixinta saddex bilood ka dib doorashada.
Marietje Schaake ayaa intaa raacisay inay fahamsanyihiin, in xukuumadda Kenya aanay diyaar u ahayn in ay nagu aqbalaan shuruudaha ku xusan is-fahamka ay kala saxiixdeen oo u dhaxeeya Midowga Yurub iyo Kenya; sababtoo ah waxay soo bandhigayaan warbixinta ugu dambeysta ah saddexda bilood ka dib maalinta doorashada, ” ayay tiri.
Waxyaabaha ka midka ah arimaha ay soo bandhigayaan gudiga kormeerka ayaa ah in dadka kenyaanka la siiyay lacago si ay uga qayb galaan dibad-baxyada siyaasadeed, isticmaalka dhaqaalaha dawlada intii lagu guda jiray ololaha, siyaasiyiinta oo handaday hay’adaha muhiimka ah ee madax-bannaan, iyo kalsooni la’aan joogto ah oo ku aaddan Guddiga Madaxa-bannaan ee Doorashooyinka iyo Xuduudaha (IEBC).
Xukuumadda Kenya oo ka qeylisay warbixin kasoo baxday Midowga Yurub added by Tifaftiraha Somalida Maanta on January 11, 2018